I-FAQs-TAIZHOUHEYA PLASTIC MOLD CO., LTD
Q: Loluphi uhlobo ulwazi imfuno ulwahlulo locaphulo?
A: Kuxhomekeke kwimveliso yakho, ke wamkelekile ukunxibelelana no-Heya Mold ukuze uyidibanise. Isizathu, kungcono ukuba unolu lwazi lungezantsi: 1, Isampulu yefoto enobungakanani okanye uyilo lwe-2D / 3D
Q: lide kangakanani ixesha lakho lokuhambisa ukungunda?
A: Kuxhomekeke kubume sokubumba kunye nobukhulu.
Ngokubanzi ziintsuku ezi-3 ~ 15 zoyilo lokungunda, kunye ne-15 ~ 60days kwimveliso yokubumba emva kokuba u-Heya Mold efumene intlawulo yakho yedipozithi kunye nesiqinisekiso sokuyilwa komngundo.
Q: Imigaqo yokuhlawula